Thola i-3bhk (1,305 Sq Ft) i-Builderfloor EsiGabeni sama-4, iGurgaon ku-RealtyWW Info
Thola i-3bhk (1,305 Sq Ft) i-Builderfloor Emkhakheni wama-4, eGurgaon
IGurgaon, eqanjwe ngokusemthethweni iGurugram, idolobha elisesifundeni esenyakatho neNdiya saseHaryana. Itholakala eduze komngcele we-Delhi-Haryana, cishe amakhilomitha we-30 (19 mi) eningizimu-ntshonalanga yenhlokodolobha yezwe iNew Delhi ne-268 km (i-167 mi) eningizimu yeChandigarh, inhlokodolobha yesifundazwe. Ungomunye wamadolobha amakhulu wesiphuphutheki eDelhi futhi uyingxenye yeNational Capital Region yaseNdiya. Ngokuya kwe-2011, iGurgaon yayinabantu be-876,900.Gurgaon isiphenduke isiphithiphithi esihola phambili ngokwezezimali nezimboni ngengeniso yesithathu ephezulu kakhulu ngeholo ngalinye eNdiya. Indaba yokukhula komnotho wakuleli dolobha iqale lapho umakhi wemoto ohola phambili waseNdiya uMaruti Suzuki India Limited esungula isizinda sokukhiqiza eGurgaon kuma1970s. Namuhla, iGurgaon inamahhovisi endawo ezinkampanini ezingaphezu kwe-250 Fortune 500.NgoMashi 2019, iGurgaon yaqokwa njengedolobha elingcoliswe kakhulu emhlabeni, ngokusho kwemininingwane ekhishwe yi-IQ Air Visual neGreenpeace.
Umkhakha ungabhekisa ku: